Ny akanjo marevaka amin'ny flounces amin'ny soroka, ny akanjo, ny tratra, ny tavy, amin'ny farany ambany, miaraka amin'ny ruffles
Nandritra ny vanim-potoana maromaro an-dàlam-be, ireo mpanakanto dia nanitrikitrika ny akanjon'ny vehivavy iray tao am-patana, satria tsy maintsy manana akanjo izy ireo. Amin'izao fotoana izao dia afaka misafidy mora foana ny dikan-teny etsy sy eroa, izay manambara tanteraka ny fanatsarana sy ny endriny ivelany. Fa miankina amin'ny fironana farany indrindra, ny iray amin'ireo vahaolana malaza indrindra dia akanjo matevina amin'ny flounces.
Blouses with flounces 2017
Ny singa mahafatifaty tsara tarehy dia mampiavaka ny akanjo amin'ny fomba hentitra amin'ny zavatra amam-pihetseham-po sy malefaka. Ireo toetra mendrika ao amin'ny kitapo mendrika dia manampy amin'ny endrika, manasongadina ny fanatsarana sy ny hamafin'ny sary. Tamin'ny fomba maoderina, ny fironana haingam-pandeha dia nahatonga ny fanandraman'ireo mpanamboatra. Ary amin'izao andro iainana izao, ny safidy dia maro karazana fa ny lamoly lamaody miaraka amin'ny flounces 2017 dia azo lazaina ho azo atao hoe universal. Ary ireo endrika malaza indrindra dia aseho amin'ny hevitra toy izao:
Ankizy iray matevina miaraka amin'ny flounces . Ny asymmetrie amin'ny fametrahana dia manan-danja amin'ny fomba maoderina. Ny tsotra sy vahaolana tena mahaliana dia ny modely tokana.
Shaped shaped . Ankoatra ny modely tsara tarehy sy hentitra, ireo mpanakanto dia manome ihany koa silhouettes tsotra miaraka amin'ny fanakatonana bokotra. Na dia izany aza, ny safidy ny fitaovana ho an'ny akanjo tsara tarehy dia tena samihafa - avy amin'ny voajanahary voajanahary sy lelafo mba tondraka tulle sy ny dantelina romantika.
Chiffon sy seza . Ampio amin'ny sary iray ny fanamarihana ny fanatsarana sy ny hakantony dia hanampy ireo modely amin'ny lamba miloko. Ny silk sy chiffon dia manana endri-javatra tsy manam-paharoa mba hamolavola tarehimarika miaraka amin'ny silhouette maimaim-poana sy maivana.
Blouse misy rongony maromaro . Ao amin'ireo fanangonana farany, ny trano fandroana dia manolotra malalaka sy tery. Ny tena mahazatra dia vokatra miaraka amin'ny dika roa na telo tapitrisa fanampiny.
Vehivavy mitaingina rongony
Rehefa misafidy akanjo fitondra amin'ny vehivavy dia zava-dehibe ny mandray an-tanana fa tsy ny hatsikana tsotra sy mahasalama fotsiny ihany, izay, tsy misy isalasalana, dia manana andraikitra lehibe amin'ny fahatokisana sy ny fahaizan'ny sary, fa koa amin'ny fananganana. Raha ny marina, ny rafitra loko mety dia afaka manantitrantitra ny fahamendrehan'ny ivelany ary manamaivana ny fahadisoana. Ny sary miloko marevaka sy voasakana dia tsy manary ny maha-zava-dehibe azy eo amin'ny lamaody vehivavy. Na izany aza, amin'ny farany dia mampiseho ny akanjo marevaka indrindra amin'ny shuttlecock dia laconic, fa manankarena amin'ny endrika:
Pastel monochrome . Ny fialan-tsasatry ny loko malaza indrindra dia manantitrantitra tsara ny fialan-tsasatry ny akanjo. Peach, mint, lavender, lemon ary ny hafa - ireo no vahaolana maoderina indrindra.
Hira fiderana monochrome . Mba hampidirana ny famirapiratana sy ny glossiness amin'ny sary, manamboatra loko misy loko matevina ny lamaody. Ny loko Marsala , emeralda, karaoty ary sôkôla no tena zava-dehibe.
Strip . Ny fanontam-pirinty malaza indrindra ho an'ny lamaody amin'ny lamaody ao am-patana dia sarisary. Ao amin'ny fironana, vahaolana mifanohitra sy ny fiovan'ny karazana hafa amin'ny gamut iray. Ny teboka rehetra eo amin'ny tadiny dia tena izy - mivadika, horizontaly, diagonal ary mivelatra.
Contrast coloring . Ny endrika mahaliana sy mahafinaritra dia mamirapiratra amin'ny endriny vita fanoloran-tena. Mety ho vahaolana roa amin'ny loko iray na loko iray na maromaro.
Ny akanjo marevaka amin'ny soroka
Ny tsara tarehy vita amin'ny felam-boninkazo dia ampiasaina amin'ny ampahany amin'ny vokatra. Iray amin'ireo vahaolana malaza indrindra amin'ny lamaody maoderina ny fanoratana ny soroka. Maka sary an-tsaina ny tapany ambony miaraka amin'ny antsipiriany ny mpanamboatra sy manamboatra ny faritra mitongilana miaraka amin'ny singa iray mifangaro iray. Tena vehivavy sy endrika tsara tarehy ho an'ny tarika elastika tsy misy vavahady. Izany matetika no entina amin'ny antsasa-mast, mampiseho ny iray na ny soroka roa. Amin'ny lamaody, vahaolana loko izay matetika mametraka ny endrika ankapobeny amin'ny sary. Saingy ny safidy manerantany dia ny akanjo marevaka miaraka amin'ny manaloka ny soroka.
Blouse mitosotra amin'ny taova
Ny mahavariana mahatsiravina dia mahafaoka ny faritry ny tanana. Ary ao anatin'ireny modely ireny ny fanandramana sy ny fanadihadiana dia hita taratra. Ny mpahaikanto dia manamboatra ny volon'ireo lavaka lava na ¾. Mahazendana tsara ny endriky ny lohataona, izay ny shuttlecock dia manidy tanteraka ny rantsantanana. Io fomba famolavolana io dia mipetaka tsara amin'ny tarehimarika miaraka amin'ny soroka mitovitovy sy ny ampahany kely. Ny fahamendrehana sy ny hamafin'ny sary dia hanampy amin'ny fametrahana fotsy fotsy amin'ny volon'ondry. Io safidy io dia heverina fa ny ankamaroan'ny universal amin'ny làlana rehetra - ny kilasy, ny kazhual, ny hariva na ny fomba amam-pihetseham-po.
Ny akanjo mitongilana eo ambany
Ny fividianana tany am-piandohana sy tsy dia mahazatra ao amin'ny arsenalanao dia ho modely, feno tanteraka amin'ny sisin'ny sisim-pejy iray. Amin'ity tranga ity dia ilaina ny mihevitra fa io fihodinana io dia mampivelatra ny silhouette. Noho izany, ireo tovovavy misy volavolan-danja amin'ny tarehimarika dia tokony hiala amin'izany fomba izany. Fa ho an'ireo vehivavy marevaka sy be lamaody maimaim-poana dia hitombo ny hatsaran-tarehy sy ny fahatokisana. Ny endrika modely asymmetrika modely, sy fohy ary lava lava. Ny fanampiana mahomby amin'ny sary iray dia fotsy na mainty mainty miaraka amin'ny flounces.
Ny akanjo marevaka eo amin'ny tratra
Raha tsy afaka mirehareha amin'ny fehiloha tsara tarehy ianao, ary ny fifidianana akanjo ho anao dia mifamatotra amin'ny fanitsiana io hadiso io, dia ny vahaolana tonga lafatra ho anao dia ho fomba iray amin'ny trimbe ao amin'ny faritra dekollete . Ny volom-borona mangatsiatsiaka dia mampiakatra ny haavony ary mibanjina ilay sary. Amin'ity tranga ity, mendrika ny hijery ny modely amin'ny sombin-dahatsoratra malalaka. Tsy manakana ity fomban-draharaha ity ny stylista fanao amin'ny artista. Ho an'ny tovovavy mirindra tsara ho an'ny hafanana sy ny hazavana, ohatra, ny akanjo marevaka amin'ny flounces manerana ny vokatra manontolo, V-shaped, manintona ny vozongo, karaoty maranitra maromaro.
Ny akanjo marevaka eo amin'ny vala
Matetika ny famokarana no antsoina hoe Basque. Na dia izany aza, tsy toy ny fanehoana an-tsokosoko henjana, dia tsy azo esorina ny akorandriaka lehibe eo amin'ny tandroka ary tsy afaka manana lanjany na tononkalo hafa. Ny fahasamihafana hafa dia ny silhouette. Raha mody manazava io tarehimarika io ny modely amin'ny Basque, dia mety ho maimaim-poana ireo akanjo marevaka amin'ny flounces amin'ny fehikibo, ary miaraka amin'ny fiparitahan'ny tara-pahazavana. Ao amin'ny fanangonana an'ity fomba ity dia matetika hita eo amin'ny tarika elastika, miaraka amin'ny fanasan-damba mifanohitra, manompo ho toy ny fizarazara ny teboka eo amin'ny fototra sy ny sary, ny fehikibo azo alaina ao anaty kitapo.
Blousy miaraka amin'ny soroka misokatra sy sodina
Tany am-piandohana, niady hevitra momba ny safidy isika rehefa misy tapa-kazo mahatsiravina eo anelanelan'ny soroka ary matetika dia mitaky fiaramanidina matevina. Na dia izany aza, sokafy ny tetezana ambony sy ny tetezana mihidy. Ireo mpanamboatra dia maneho akanjo maotina miaraka amin'ny tsipika eny an-tsorony. Ity sary ity dia manan-danja kokoa ho an'ny modely amin'ny lava lava na ¾. Ny fehin-tsoavaly amin'ny lohataona matetika dia mandeha amin'ny akanjo matevina na lava. Amin'io tranga io dia afaka mamoritra ny soroka sy ny tanana miaraka amin'ny tanana ny fanala. Ny fikajiana malaza iray tamin'ity vanim-potoana ity dia kopo fohy iray vita amin'ny chiffon na kavina maina teo amin'ny tarika elastika, nanokatra ny tampony tanteraka.
Blouses miaraka amina ruffles
Ny fanangonam-bokatra lava be dia tsy manilika ny fisian'ny trano fandroana hafa. Ny iray amin'ireo karazana fanontana malaza indrindra dia felana kely. Ny singa toy izany dia manan-danja kokoa amin'ny vanim-potoana mafana. Ny felam-boninkazo amin'ny ruffles sy ny rambony dia mety ho tapaka - asymmetrika, loko, maotina, maimaim-poana. Mahaliana ny mijery ny famaranana farany - hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe. Ny cloaks dia afaka mameno ny vokatra any amin'ny toerana samihafa, ohatra, ny tetezana eo amin'ny sisiny, ary mamelatra eo amin'ny tratra na tanana. Ny vahaolana toy izany amin'ny sary vongana dia hanjavona tsara ny fahatsoran'ny sarin'ny orinasa henjana.
Blouses miaraka amin'ny flounces ho an'ny vehivavy feno
Ireo zazavavy izay tsy afaka mirehareha amin'ny tsy fisian'ny centimeter fanampiny, dia tsara ny misafidy ny akanjo toy izany. Zava-dehibe ny hiheverana fa mampitombo ny habetsaky ny fahavitrihana. Noho izany, ny vahaolana tsara indrindra dia fehiloha mavomavo miaraka amin'ny kofehy kofehy, sehatra, landihazo matevina. Ampitahao amim-pahombiazana tsara ny isam-bolana amin'ny endriny, ary asongadino ny tavy. Mitandrema amin'ny fomba fanehoana an-tsokosoko. Ny karazana V-shaped eo amin'ny tratra dia hanantitrantitra ny fipetrahana. Ary mba ho 100% azo antoka fa ny singa tsara tarehy ao amin'ny poketra dia tsy hampiakatra ny hamaro-bidy, misafidiana famolavolana amin'ny volombava amin'ny taova na ny rambony.
Inona no tokony ataoko amin'ny akanjo mipaoka?
Ny karazam-pirazanana tsara tarehy dia ahafahanao mameno akanjo maotina sary. Na izany aza, misy misy nuance. Ho an'ny akanjo marevaka miaraka amin'ny mirenireny miaraka amin'ny ambiny ao am-bala, dia tsara ny mihaino ny fanehoan-kevitry ny stylists. Ireo matihanina mahomby dia mandinika ny vahaolana toy izany:
Jeans and shorts . Ny singa amam-pitiavana ao am-bala dia hampitombo ny fahamendrehana amin'ny tongolobe azo antoka sy azo antoka. Amin'ity tranga ity, ny karazana mety dia ny pataloha mahazatra, felana kely avy amin'ny lohalika, hoditra fohy.
Skirt sharp . Ny safidy tsara iray amin'ny volon'ilay volomparasy dia zavatra henjana sy mahavariana. Amin'ity tranga ity, azo atao ny safidy noforonina - miaraka amin'ny tapa-kofehy, avy amin'ny lamba mamirapiratra, miaraka amin'ny fitongilanana ambony sy ny hafa.
Accessories . Raha mameno ny vokatra eny an-tanana na eo amin'ny farany ambany ilay volombava, dia tsy voafetra ny safidy amin'ny firavaka. Ny endriny miaraka amin'ny soroka misokatra tsy misy taovolo sy rongony dia azo ampiana amin'ny rojo karana na kakazo. Ny vahaolana mandresy amin'ny fandrosoana ho an'ny karazana dia ho satroka fahavaratra.
Footwear . Ny modely amin'ny alàlan'ny volavolan-daka sy multilayer shuttlecocks dia tsara kokoa ny mamarana miaraka amin'ny kilasy - sandals amin'ny kiraro, sambo, ballet. Ny fatorana asymmetrika sy laconic dia mifanaraka amin'ny sehatra sy ny fomba fanatanjahantena.
Ny endriky ny akanjo mipaoka
Ny lamaody maoderina dia manintona ireo akanjom-behivavy tsara tarehy, ho toy ny singa iraisam-pirenena amin'ny garderobe. Mifanaraka amin'ny jeans na kiraro mahazatra, hamorona tsipìka keszhuyalny ianao miaraka amin'ny akanjo mipetaka amin'ny flounces, izay tsara kokoa hamenana amin'ny kiraro, sandals na traktera. Ny antokom-pihetseham-po am-pitiavana dia hameno ny akanjo lava midi midina midadasika amin'ny endriky ny masoandro sy ny sandany madio eo amin'ny voditongotra. Ankoatra ny pataloha mahazatra amin'ny tendroka mahafinaritra, afaka mandeha miasa na any amin'ny birao ianao, raha tsy voafehin'ny fehezan-kery henjana ny fitsipika akanjo. Modely Lacy na vokatra miaraka amin'ny voluminous frill fitondra marefo amin'ny takariva takariva na baskety.
Ankolafy marevaka amin'ny akanjo mipaoka
Dress Case amin'ny Basque
Fangatahana asa amin'ny akanjo lava lava
Tafio-doha - mihoatra ny 50 ny sarin'ireo modely modely amin'ity vanim-potoana ity
Ny akanjo lava miaraka amina rindrina misokatra dia manambany sy mamitaka
Ny alina fialantsin'ny vehivavy
Vehivavy miaraka amin'ny shorts
Akanjo lava mavokely
Inona ny potasy?
Dorozhkina Tatyana - akanjo hoditra
Ahoana raha tsy te hiasa ny vadiko?
Ny fomba famolavolana anana - ny lokony mampitombo ny anana amin'ny varavarankely
Fonony ho an'ny seza iray
Fiakanjoan'ny vehivavy - Herintaona 2014
Akanjo ho an'ny volo misy menaka mandanja
Nurofen nandritra ny fitondrana vohoka
Rings from palladium
Amin'ny akanjo hanaovana akanjo manga?
Ny varavarana fidirana omena
Endrey mahasalama ny manamboara ny navaga amin'ny menaka fanosotra?
Rosiana Black Terrier - famaritana zary